သင်၏ Facebook သူငယ်ချင်းများကိုစိန်ခေါ်ရန်အတွက်ဘောလုံးပွဲတစ်ခု Androidsis
Francisco Ruiz | | Android ဂိမ်းများ, NOTICIAS
နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်ပြီးမီဒီယာ၌ကျွန်ုပ်တို့နောက်ဆုံးလုပ်သမျှနှင့်အကြံပြုချက်များသည်ဤခက်ခဲသောကာလအတွက်အနည်းငယ်ပိုကောင်းသောကုန်ပစ္စည်းများအတွက်သုံးစွဲရန်ဖြစ်သည်။ Coronavirus သည်ကမ္ဘာအနှံ့ပျံ့နှံ့ဖြစ်ပွားသောကပ်ရောဂါကိုရပ်တန့်ရန်အိမ်မှထွက်ခွာရန်တားမြစ်ထားသည့်ခက်ခဲသောရက်သတ္တပတ်များဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းဆုံး (၃) ရက်နေပြီးအိမ်မှမထွက်ဘဲ (၇၂) နာရီကြာအောင်ကြာခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလိဂ်အားလုံး၏ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများကိုလည်းပယ်ဖျက်ပြီးဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီစာကိုပို့ပေးပါ အဟောင်းဘောလုံးဂိမ်း အဘယ်သူသည်ပြီးသားအတင်းအကျပ်ချုပ်နှောင်ထား၏ဤသည်နေ့ရက်ကာလ၌ထည့်သွင်းဖို့ပြန်လည်ရောက်ရှိ ဒါကကျွန်တော်တို့ကို Facebook နဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အွန်လိုင်းပေါ်မှာအချိန်နှင့်တပြေးညီကစားခွင့်ပေးတယ်.
အဆိုပါဂိမ်းသည်လူသိများသောဂိမ်းဖန်တီးသူနှင့်ဖန်တီးသူမှဖြစ်သည် လွမ်းတယ်အများစုမှာ Facebook ကဲ့သို့အောင်မြင်မှုရစေသောဂိမ်းများဖြစ်သည် ဘောလုံးသပိတ် - Multiplayer Soccer u ငါတို့အကြောင်းကိုပြောပြပြီးသားအခြားဂိမ်းတွေဖြစ်တဲ့ US ရေပန်းအစားဆုံးဂိမ်း၊ ငါ့အတွက်အကောင်းဆုံး၊ ၈ Ball Pool ဂိမ်းသည် Androidsis တွင်ကျွန်ုပ်တို့အချိန်အတန်ကြာသင့်အားအကြံဥာဏ်ပေးသည်.
1 Football Strike - Multiplayer Soccer ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
2 Football Strike - Multiplayer Soccer မှအခမဲ့ပေးထားသောအရာများ
Football Strike - Multiplayer Soccer ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
ဘောလုံး Strike - ကစားသူအများအပြားဘောလုံး
Football Strike - Multiplayer Soccer မှအခမဲ့ပေးထားသောအရာများ
Aunqiue Football Strike - Multiplayer Soccer သည်ဂိမ်းသို့မဟုတ်လက်မှတ်များဝယ်ယူရန်အတွက် in-app ၀ ယ်ယူခြင်းကိုပေးထားသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယူရိုငွေတစ်ခုတည်းကိုမဆပ်ရဘဲစုစုပေါင်းပုံမှန်နဲ့ကစားနိုင်ပြီးကစားနိုင်မှာပါ.
En Football Strike - Multiplayer Soccer ဘောလုံးကစားသမားကိုတီထွင်ခြင်းဖြင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်မျိုးစပ်ကြားရွေးနိုင်သည်။, ငါထင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် miniclip ၏ဖန်တီးသူများကလှပသောအားကစားထဲကမိန်းမတို့ကိုချန်မထားဘူးသောမှန်ကန်သောထက်ပိုပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Avatar သို့မဟုတ် gamer ပုံကိုညှိနိုင်သည့်ဂိမ်းအားလုံးတွင်မတူညီသောမျက်နှာအင်္ဂါရပ်များ၊ ဆံပင်အမျိုးအစားနှင့်အဝတ်အစားများကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။ ဂိမ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ avatar ကိုဖန်တီးခြင်းနှင့်ညှိခြင်း၏အမှန်တရားမှာ၎င်းသည်သူ၏အားနည်းချက်မဟုတ်ဟုဆိုရမည် ၎င်းတွင်အလွန်အခြေခံကျသောစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုများပါဝင်သည်.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကျွန်တော်ကစား, ဝင်ငွေအဖြစ်, အတွေ့အကြုံနှင့်အဆင့်အထိဝင်ငွေသကဲ့သို့ငါတို့သည်လည်းနိုင်ပါလိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂိမ်းအတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများရရှိမည့်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိသောအားကစားအိတ်များကိုဖွင့်ပါ ခြေထောက်ကာကွယ်သူများ၊ ရှပ်အင်္ကျီအသစ်များ၊ ဘောင်းဘီရှည်များနှင့်ဘွတ်ဖိနပ်များနှင့်အမျိုးမျိုးသောဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအပြင်စွမ်းအားမြှင့်ခြင်းနှင့်ကစားခြင်းအတွက်ကဒ်များစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ဂိမ်း၏အရှိဆုံးဒီကဗျာ option ကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသောဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ပါတယ် ဂိမ်းများကိုသူငယ်ချင်းများနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်ပြီးအွန်လိုင်းဂိမ်းများသို့အချိန်နှင့်တပြေးညီဖိတ်ကြားနိုင်ရန်အတွက် Facebook အကောင့်ဖြင့်တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ပါ.
ဂိမ်းထဲမှာငါတို့ကစားရန်ရွေးချယ်စရာသုံးခုရှိသည်။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည်သေနတ်ပစ်ပြိုင်ပွဲ၊ က အမြန်ရိုက်ချက်များရွေးစရာ ကစားသမားနှစ် ဦး စလုံးအားတစ်ပြိုင်တည်းပြသနိုင်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောပစ်မှတ်များကိုထိခြင်း၊ ဂိုးအပေါ်ဂိုးသွင်းခြင်းဖြင့်ရမှတ်အများဆုံးရရှိသောသူကိုကြည့်ရှုရန်သူငယ်ချင်းများနှင့်စိန်ခေါ်နိုင်သည်။
သင်ခဏတစ်ကစားနေပြီးသင်ကစားနိုင်သည့်ဂိမ်းများအတွက်ဒင်္ဂါးပြားများရသောအခါ၊ ဒုတိယရွေးစရာကိုဖွင့်လိမ့်မည် အခမဲ့ရိုက်ချက်များ ကျွန်ုပ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအလွန်အသည်းအသန်ရှိသောရွေးစရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Facebook ၏မိတ်ဆွေတစ် ဦး တည်းကိုပင်စိန်ခေါ်နိုင်သကဲ့သို့ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်ပြိုင်ဘက်ပြိုင်ဘက်နှင့်မဆိုကစားနိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ကစားလိုသည်။
ဂိုးသမားတစ် ဦး သည်ဂိုးသမားအားသူတို့ဂိုးလိုင်းကိုမဖြတ်ကျော်မီ၎င်းတို့အားတားဆီးရမည့်သွက်လက်သောစွမ်းရည်ကိုပေါင်းစပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ (ပင်နယ်တီအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုများကဲ့သို့) အကောင်းဆုံးငါးပွဲသို့အလှည့်အပြောင်းတွင်အနိုင်ရသူသည်အများဆုံးရည်မှန်းချက်များကိုရရှိသူဖြစ်သည်။ ဂိမ်း၏အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုစလုံးတွင်အိုး၏အစိတ်အပိုင်းနှင့်ဂိုးသမားသို့မဟုတ်ဂိုးသမား၏အစိတ်အပိုင်းတွင်ပါဝင်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ အမြဲတမ်းတကယ့်အချိန်နှင့်အားလုံးသည်တကယ့်ပြိုင်ဘက်များဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတော့မင်းကိုဖွင့်ပေးလိမ့်မယ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်ရှာဖွေရေးလို့ခေါ်တဲ့ဂိမ်းရွေးစရာတစ်ခုကတော့ငါတို့ဆုဖလားတွေရနိုင်တယ် အကယ်၍ ကျွန်တော်ဒီပြိုင်ပွဲခုနစ်ခုကိုအောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့လျှင်ငါအရင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ဂိမ်းအမျိုးအစားများရောထွေးထားတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့ Shooting Race game mode နဲ့ Free Kicks game mode တို့ပါဝင်ပါတယ်။
ဂိမ်းထဲမှာအံ့သြစရာများသို့မဟုတ် extras အကြားတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်သာကစားခွင့်ပေးလိမ့်မည်ဆိုလိုသည်မှာ ၂၄ နာရီလျှင်တစ်ကြိမ်၊ ထိုအမည်အောက်၌ရှိသည် Lucky Shot, ကျွန်တော်တို့ကိုဂန္ထဝင်ဒိုင်ယာနာကိုရိုက်နှက်ရန်အခွင့်အရေးပေးလိမ့်မည်။ ရရှိသောရမှတ်အရငါရိုက်ချက်တစ်ခုတည်း၌ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပေးကမ်းခြင်းရှိမရှိပေါ် မူတည်၍ ၎င်းတို့၏အရေးပါမှုတွင်များစွာကွဲပြားသောလက်ဆောင်များရရှိရန်အခွင့်အရေးတစ်ခုတည်းနှင့်အတူဖြစ်သည်။ Diana ရဲ့အလယ်ဗဟိုလား၊ ဤအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့သိသောအခက်အခဲများနှင့်အတူလေတိုက်သောအင်အား၏နှစ်ဆအင်အားကိုသူ့ဟာသူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသိရှိခြင်းဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်တစ်ချက်တည်းပစ်ခတ်မှုတွင်အနိုင်ယူရန်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည်။
Mas ထဲတွင်တွေ့ရသောထိုရွေးချယ်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အလွန်ကြိုက်နှစ်သက်သော Lucky Shot option အပြင်အပြင်တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်အခမဲ့ဖြစ်သောရော့ကက်ရိုက်ချက်ကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်လေ့ကျင့်နိုင်သည့်နေရာတွင်ရည်မှန်းချက်ကိုရိုက်ကူးပြီးအကြားအတားအဆီးဖြစ်စေသည်.
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သင်၏ Facebook သူငယ်ချင်းများနှင့်ထိတွေ့ရန်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည့်ဂိမ်းဖြစ်သည် ဒါ့ကြောင့်သွားကိုက်လိုက်ရင်ကျန်းမာတဲ့ကိုက်အချို့ကိုယူပါ။ ဒီပို့စ်ရဲ့အစမှာသင့်ကိုငါထားခဲ့တဲ့ဗွီဒီယိုထဲမှာ Shooting Race mode နဲ့ Free Kicks mode မှာဂိမ်းတစ်ခုယူခြင်းအားဖြင့်ဂိမ်းကဘာတွေကမ်းလှမ်းတယ်ဆိုတာကိုပြပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကိုလက်လွတ်မခံပါနဲ့ !!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » သင့်ရဲ့ jumpsuit ကိုချွတ်ပြီးသင်၏သူငယ်ချင်းများအားဂိမ်းများကိုအစစ်အမှန်အချိန်တွင်ကစားရန်အတွက်ကစားပွဲတစ်ခု။
Might & Magic - Chess Royale လိဂ်များ၊ ဆုများနှင့်အခြားအရာများနှင့်အတူမွမ်းမံမှုများ